သူ စိမ်း တစ် ယောက် ရဲ့ တေး သွား တ ပုဒ်
What Can I Do(어쩌라고) - SEUNG RI(승리)
ကိုးရီးယားမှာတင်မကဘဲ အာရှတလွှားက ပရိသတ်တွေအထိ ဖမ်းစားထားတဲ့ ပျိုပျိုတို့ ရဲ့ သည်သည်းလှုပ်
BIGBANG အဖွဲ့ရဲ့ အငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ လူချောလေး SEUNG RI(승리)ရဲ့ V.V.I.P ဆိုတဲ့ အယ်ဘမ်လေးထဲက What Can I Do(어쩌라고) ဆိုတဲ့ သီချင်းမြူးမြူးလေးပါ ။ တီးလုံးတွေကော ဆိုထားတာကော ရိုက်ထားတဲ့ MTV တွေပါလန်းလွန်းလို့နံပါတ်တစ်နေရာကို အချိန်တော်တော်ကြာ ဒီသီချင်းလေးနဲ့ သိမ်းပိုက်ထားလေရဲ့ ။ YG Entertainment ကနေထုတ်လုပ်ထားပါတယ် ။
""" 난 어쩌라고
내 모든걸 다주고 너에게 다바쳐
이제 남은거라곤 내겐 너뿐야
더이상 나를 피하지는 마 """
Music Video ..""VI VI VI like this.can't stop this.""
ဒါလေးကတော့M NET မှာဖျော်ဖြေသွားတဲ့ SEUNG RI(승리) ရဲ့ Performance လေးပါ ။
""" I'm break it down down down
break it break it down down """
Posted by http//www.thusainetayork.com at 11:20:00 PM0comments
BAD GUY(나쁜남자) - JOO(주)
အသံအေးအေးငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ ပညာသားပါပါဆိုတတ်ပြီး ပရိသတ်တွေကို ဆွဲဆောင်ခဲ့တဲ့ JOO(주) ရဲ့ Heartmade ဆိုတဲ့အယ်ဘမ် အသစ်လေးထဲက BAD GUY(나쁜남자) ဆိုတဲ့သီချင်းအေးအေးလေးပါ ။သူမအသံလေးနဲ့လိုက်ဘက်ပြီး ရင်ထဲမှာ ထိသွားစေမယ့်
ဒီသီချင်းလေးကိုJYP Entertainment ကနေထုတ်လုပ်ထားပါတယ် ။
""" 이 나쁜 남자야 넌 못된 남자야
가면 어떡해 떠나면 어떡해 에 에 """
Posted by http//www.thusainetayork.com at 11:13:00 PM0comments
STAY - MBLAQ
မနှစ်က ၂၀၁၀ MK MNET Music Festival မှာ အကောင်းဆုံးအမျိုးသားအဖွဲ့ လိုက်ဆု
ဆန်ခါတင်ဝင်ခဲ့ပြီး ပျိုပျိုတို့ ကို ဖမ်းစားထားခဲ့တဲ့ MBLAQ အဖွဲ့ ရဲ့ BLAQ Style ဆိုတဲ့အယ်ဘမ်လေးထဲက STAY ဆိုတဲ့ သီချင်းကောင်းလေးပါ ။
လက်ရှိမှာ TOP 10 စာရင်းဝင်နေတဲ့ ဒီသီချင်းလေးကို JTUNE CAMP ကနေထုတ်လုပ်ထားပါတယ် ။
""" Oh baby stay with me
내 곁에만 있어 줘
니가 내 전부였단 말야
Stay in my heart """
performance at MBC(MUSIC BANK)
Posted by http//www.thusainetayork.com at 10:22:00 PM0comments
HIGH HIGH - G-DRAGON & T.O.P
လက်ရှိကိုးရီးယားလောကရဲ့ နံပါတ်တစ်နေရာမှာရှိနေတဲ့ BIGBANG , နံမယ်ကြားတာနဲ့ ကောင်မလေး
တွေအကုန် သည်းသည်းလှုပ်သွားမယ့် BIGBANG အဖွဲ့ ထဲက ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ G-DRAGON နဲ့ T.O.P တို့ ရဲ့ HIGH HIGH ဆိုတဲ့ RAP သီချင်းမြူးမြူးလေးပါ ။ နံပါတ်တစ်နေရာကိုထွက်ထွက်ချင်း ယူလိုက်လေတဲ့ ဒီသီချင်းလေးကို YG Entertainment ကနေထုတ်လုပ်လိုက်ပါတယ် ။
""" High high I'm so high
High high up in the sky """
SBS ရုပ်သံမှာဖျော်ဖြေသွားတဲ့ SHOW ပွဲလေးပါ
Oh Yeah - G-DRAGON & T.O.P(Feat...PARK BOM of 2NE1)
ဒီအယ်လ်ဘမ်လေးထဲကဘဲ Oh Yeah ဆိုတဲ့ နောက်ထပ် RAP သီချင်းလေးတပုဒ်ပါ ။ 2NE1 အဖွဲ့ထဲက မချောလေး PARK BOM က FEAT လုပ်ထားပါတယ်။
""" Oh Yeah oh oh oh (Oh Yeah 난 Feelin' Like)
Oh Yeah um- (oh yeah 제발 날 멈추지 마)
Oh Yeah (oh oh oh My My My)
Oh Yeah Oh Yeah (Oh Yeah, yeah yeah yeah) """
Posted by http//www.thusainetayork.com at 11:33:00 PM0comments
Into the Rhythm(리듬속으로) - Seo In Young (서인영)
ကိုးရီးယား ဂီတလောကရဲ့ SEXY QUEEN တပါးဖြစ်ပြီး ယခင်က လျှမ်း၂တောက်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ Jewelry အဖွဲ့ရဲ့ Stylish ဖြစ်တဲ့မချောလေး Seo In Young (서인영) ရဲ့ Ellythm
ဆိုတဲ့ အယ်လ်ဘမ်လေးထဲက Into the Rhythm(리듬속으로) ဆိုတဲ့ DANCE သီချင်းမြူး၂လေးပါ ။
ကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတာ နားထောင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ လူပါလိုက်ကချင်စိတ်ပေါက်တယ်..
STAREMPIRE Entertainment ကနေထုတ်လုပ်ထားပါတယ် ။
""" 리듬속으로 OHOHOHOHOHOHOH
세상을 흔들어 OHOHOHOHOHOH """
Music Video ရိုက်ထားတာကလည်း လန်း ရှိုးပွဲလေးတွေကလည်းလန်းလို့ရှုစားစေသတည်း..
Posted by http//www.thusainetayork.com at 10:54:00 PM0comments
How Dare You (니까짓 게) - SISTAR
အသံအားကောင်း၂နဲ့ ဆိုတတ်တဲ့ မချောလေးယောက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ SISTAR အဖွဲ့ရဲ့ How Dare You (니까짓 게) ဆိုတဲ့ ခပ်မြူးမြူးသီချင်းလေးပါ ။ ခုတလော hot နေလေရဲ့ ။ STARSHIP
Entertainment ကနေထုတ်လုပ်ထားပါတယ် ။
""" Baby baby baby baby baby
니까짓 게 뭔데 """
Posted by http//www.thusainetayork.com at 11:25:00 PM0comments
YAYAYA - T - ARA
ခုနောက်ပိုင်းမှာ အကလေးတွေ သီချင်းလေးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကိုဖမ်းစားလာခဲ့ပြီး တဟုန်ထိုးနံမည်တတ်
လာတဲ့T - ARA ရဲ့ YAYAYA ဆိုတဲ့ သီချင်းအသစ်လေးပါ ။ လူရိုင်းမလေးတွေလို သရုပ်ဆောင်ထားတာလေးရယ် ခပ်မြူးမြူးသီချင်းလေးရယ်ကြောင့် နံပါတ်တစ်နေရာကိုရောက်လာပါတယ် ။
CORE CONTENTS MEDIA မှထုတ်လုပ်ထားပါတယ် ။
""" Let me seeya LaLaLaLa
우리 둘이 YaYaYaYa
Shubidub Su Supa Nova """
Why Are You Being Like This?(왜 이러니 ) - T - ARA
နောက်ထပ် နားထောင်ကောင်းတဲ့သီချင်းလေးဖြစ်တဲ့Why Are You Being Like This?
(왜 이러니 )ဆိုတဲ့သီချင်းလေးကိုလည်း ကြိုက်မိနေပါတယ် ။
"""" 왜 이러니 왜 이러니 정말 왜 왜 왜 이러니
어떡해 답답해 그만 내게 내게 왜이래
사랑해 좋아해 이제 내게 말해 바보야 """
MBC ရုပ်သံမှာဖျော်ဖြေသွားတဲ့ T - ARA ရဲ့ ရှိုးပွဲလေးပါ ..왜 이러니 yayaya !!!
Posted by http//www.thusainetayork.com at 9:41:00 PM0comments
အဆိုအကလေးတွေကောင်းပြီး ကိုးရီးယားမှာသာမက အာရှတလွှားမှာပါ နံမည် ရလာတဲ့ ကိုကို
တို့ရဲ့အသည်းစွဲ KARA ရဲ့ JUMPING ဆိုတဲ့သီချင်းမြူးမြူးလေးပါ ။ ရိုက်ထားတာလေးတွေနဲ့ တီးလုံးလေးတွေက ကြည့်ကောင်းလို့ Top Ten စာရင်းမှာ ၀င်နေလေရဲ့ ..DSP MEDIA ကနေ
"" Jumpin' Jumpin' Jumpin' up
Jumpin' Jumpin' Jumpin' up ""
ဘယ်လို JUMPING ကြမလဲလို့ ကြည့်လိုက်နော်
Posted by http//www.thusainetayork.com at 11:11:00 PM0comments
HOOT(훗) - Girl's Generation(소녀시대)
ပျိုပျို အိုအို ကိုကို မောင်မောင် ဘိုးဘိုးတို့ အထိအနော်အပါအ၀င် အရမ်းအရမ်းခိုက်ကြတဲ့ နတ်မိမယ်လေးများ Girl's Generation(소녀시대)ရဲ့ HOOT(훗)သီချင်းအသစ်လေးပါ ။ သီချင်းလေးလည်းခိုက် Music Videoလေးလည်းခိုက် လူလေးတွေလည်းခိုက်လို့HOOT HOOT HOOT ပါဘဲ..SM Entertainment ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုလေးပါ ။
""" 넌 역시 Trouble Trouble Trouble
나는 훗 훗 훗 """
Music Video လေးပါ ။
We Love Girl's Generation(소녀시대)
Posted by http//www.thusainetayork.com at 10:14:00 PM0comments
삐리뽐 빼리뽐(Beribom Bellribom) - 남녀공학(CODE SCHOOL)
အဖွဲ့အသစ်လေး 남녀공학(CODE SCHOOL)ရဲ့ 삐리뽐 빼리뽐(Beribom Bellribom) ဆိုတဲ့ သီချင်းမြူးမြူးလေးပါ ။ ခုတလော သူတို့ သီချင်းလေးတွေကို လူကြိုက်များနေလေရဲ့ ။ ယောင်္ကျားလေး
ခြောက်ယောက်ဖြစ်တဲ့ gwan hein , u song ,song min , tae on , gan ho ,nuri
တို့ နဲ့ မိန်းကလေးလေးယောက်ဖြစ်တဲ့ hyo yng ,hae won ,su mi , chan mi
စတဲ့အဖွဲ့ဝင်ဆယ်ယောက်တို့နဲ့ ဖွဲ့ စည်းထားပြီး CORE CONTENTS MEDIA ကနေ
"" 조금만 더 가까이 다가와봐봐
조금만 더 내 맘을 다 가져봐봐 ""
Music Video လေးက ချစ်ဖို့ ကောင်းပါတယ် ။
"" 삐리뽐 빼리뽐 ""
Posted by http//www.thusainetayork.com at 11:55:00 PM0comments
To You Wouldn't Answer My Calls(전활 받지 않는 너에게) - 2AM
သီချင်းအေးအေးငြိမ့်ငြိမ့်လေးတွေကို ပညာသားပါပါဆိုတတ်တဲ့ 2AM ရဲ့ Saint o'clock ဆိုတဲ့
အယ်ဘယ်လေးထဲက To You Wouldn't Answer My Calls(전활 받지 않는 너에게)
ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးပါ ။ နားထောင်လိုက်တာနဲ့ ရင်ထဲစွဲသွားပြီး ထပ်တလဲလဲနားထောင်ရင်း လိုက်ရွတ်
နေမိစေပါတယ် ။ ရင်ထဲကိုလည်းခံစားချက်တွေပေးစေတဲ့ ဒီသီချင်းလေးကို JYP Entertainment ကနေထုတ်လုပ်လိုက်ပါတယ် ။
"" 이미 전활 받지 않는 너에게
소용 없는 일이라 해도 ""
Posted by http//www.thusainetayork.com at 11:08:00 PM0comments
I`ll Be Back - 2PM
လက်ရှိကိုးရီးယား ဂီတလောကရဲ့ ပျိုပျိုအိုအိုတို့ ရဲ့ အသည်းစွဲ 2pm ရဲ့ Still 2:00pm ဆိုတဲ့အယ်ဘယ် လေးထဲက I`ll Be Back ဆိုတဲ့သီချင်း မြူး၂လေးပါ ။ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ အရှိန်တွေရယ် ဒီသီချင်းလေးရဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေကြောင့် နံပါတ်တစ်နေရာကိုဆုပ်ကိုင်ထားနေလေရဲ့..JYP Entertainment ကနေထုတ်လုပ်ထားပါတယ် ..
"" I’ll be back
나보다 사랑 할 순 없기에 ""
Posted by http//www.thusainetayork.com at 10:24:00 PM0comments
MY SIDE, MY LIFE, MY MUSIC
LET'S TALK ABOUT ♡
What Can I Do(어쩌라고) - SEUNG RI(승리) ကိုးရီးယား...
BAD GUY(나쁜남자) - JOO(주) အသံအေးအေးငြိမ်ငြိမ်လေးန...
STAY - MBLAQ မနှစ်က ၂၀၁၀ MK MNET Music Festi...
သူငယ်ချင်းတို့ရေ မိမိလိုချင်တဲ့ KOREAN SONG နဲ့ ENGLISH SONG တွေကိုဒီဘလော့ လေးမှ တဆင့်တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ် ။ C BOX ထဲမှာ မိမိလိုချင်တဲ့ သီချင်းအမည်နှင့် သီဆိုသူအမည်ကို တိတိကျကျရေးထားခဲ့ပြီး ပေးပို့ပေးရမည့် မိမိ အီးလ်မေးလ်လိပ်စာ ကိုရေးထားခဲ့ရင် အရောက်ပို့ပေးမယ် သိလား ..
LET'S GO TO BLOB PARTY
CUTE SONGS TO LISTEN
RAINBOW BAND (KOREA)
What Time Is It Now At Korea